Xaqiiq: Maxkamaddii Södertälje - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaqiiq: Maxkamaddii Södertälje
La daabacay torsdag 29 augusti 2013 kl 16.50
* Bishii agoosto ee sannadkii tagay 2012 ayay maxkamadi ku xukuntay 18 ruux xukunno dhaadheer ee la xiriira dembiyo ey ka mid ahaayeen saddex dil, kuwaasina oo uu mid dhacay diseembar 2009 iyo mid kale oo loo geeystey laba wiil oo walaalo ah juulaay 2010 iyaga oo ku sugnaa goob khamaarka lagu ciyaaro.
* Hogaamiyaha kooxda lagu magacaabo shabakadda Södertälje ayaa loogu xukumey dilal kala duwan xabsi daa’in, iyadoona 16 ruux ey ku dhaceen xukunno u dhexeeya sannad iyo lix bilood iyo xabsi daa’in. Halka laba ruux lagu xukumey goobaha dar-yeelka dhallin-yarada. Hogaamiyaha shabakadda ayaa sidoo kale lagu xukumey af-duub sharci-darro, dhac halis ah, laba fal oo baad ah, isku-day baad iyo jebin culus ee xeerka hubka ka degsan.
*Intaa waxaa ka dambeeysay in maxkamaddii oo dhan dib loogu noqdey, maadaama qareen ka mid ahaa qareemmadii maxkamadda qaadayey lagu eedeeyay inaanu cadaalad ka noqon karin. Maanta ayuu soo baxay go’aankii labaad ee maxkamadda.
* Maxkamadda Södertälje ayaa u qeexday in kooxda shabakadda Södertälje tahay koox dembiiley ah oo sidii jaranjaro u dhisan, leh hogaamiye adag oo dhaqaalihiisa badankiis uu ku soo galey ha baan sharciga waafaqsanayn iyo handadaad.